Taliyayaal xilkooda ku waayay sabab la xariirta Saadaq Joon | KEYDMEDIA ONLINE
Tan iyo markii xilka laga qaaday taliyihii ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Joon, 12/4/2021, waxaa soo if baxay kala shaki weyn oo ka dhashay xil ka qaadista Joon, Madaxtooyada Soomaaliya ayaana go’aansatay in ay isku shaandhen ku sameyso hoggaanka ciidanka Booliska Gobolka Banaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha dhawaan loo magacaabay Booliska Gobolka Banaadir, Farxaan Qoroole, ayaa caawa ku wareegaya sandhigyada Booliska dedmooyinka Caasimadda, kadib isku shaandheyn, maanta lagu sameeyay taliyayaasha saldhigyada Booliska.
Farxaan Qaroole, Saldhigyada uu caawa tagay, waxaa ka mid ah saldhigga Degmada Waabari, oo la filayo inuu xikii laga qaaday caawa wareejiyo, taliyihii Ciidanka Booliska degmada, Maxamed Cabdinaasir, oo loo yaqaan “Mooshin”.
Ilo Xog ogaal ah ayaa Keydmedia Online, u sheegay in sababta Mooshin xilka looga qaaday ay tahay, inuu ka dhaga adeegay, duullaankii xalay ka dhanka ahaa Saaxiibkiis, Saadaq Joon, oo dhawan xilkii iyo garaaddihii ciidanka laga xayuubiyay.
Maxamed Cabdinaasir Mooshin, wuxuu ka mid ahaa raggii loo xirxiray kiiskii dilka ahaa ee Guddoomiyihii degmada Hodan, Candixakiin Dhagajuun, inkastoo markii danbe la sii daayay. wuxaana xilka taliyaha saldhigga Waabari, loo magacaabay billowgi 2019-kii.
Mooshin, wuxuu ka mid ahaa Taliyaayl, aad shacabku uga cawdaan, waxaase la yaab ah, in aan dan shacab xil looga qaadin ee uu eersaday Saadaq Joon ku duul, waxaana xilkiisa la wareegay, Axmed Gaashan oo loo yaqaan Calooley halka dadka qaarna u yaqaanaan Baashane.
Dhanka kale, waxaa isna xilkii laga qaaday taliyahii ciidanka booliska ee degmada Howlwadaag, Gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamuud, oo hadda ku jira Xabsi, kana mid ah dadka ku eedeysan dilka AUN, Guddoomiyihii degmada Hodan, Candixakiin Dhagajuun.
Sidoo kale taliyaal ay ka mid yihiin, Taliyaha Booliska Degmada, Shibis, Wadajir, Dayniile iyo kuwo kale ayaa xilkii laga qaaday, waxaana dhamaantood la sheegay in laga shakiyay, oo Kooxda Farmaajo ka cabsadeen in ay maraan jidkii Saaxiibkood Saadaq Joon.
Isku shaandheyntaan la sameeyay, waxay sidoo kale saameysay, taliye ku xigeynkii qeybta guud, ‘Jeego’ waxaana lagu baddaly Siciid Baryare, oo laga qaaday Degmada Wadajir, halka Taliyihii qeybta Galbeed, Xundubey, lagu badalay nin la yiraahdo Cali Goof-jooge, oo ku sime ka ahaa degmada Holwadaag.